Ntuziaka Social Media maka Azụmaahịa
Kemgbe ọnwa gara aga, a na m agụ ya Tinye aka: Nduzi zuru ezu maka ụdị na azụmahịa dị iche iche iji wuo, Zụlite, na Tụọ Ọganiihu na Web Ọhụrụ.
Nke a abụghị ìhè agụ - a zuru ezu ndu abya abụru iphe-edobe! Ọ bụ akwụkwọ ịchọrọ ịnọdụ ala, tinye uche na ya n'otu n'otu n'otu oge. Brian ejirila akwụkwọ a mechaa jiri aka ya rụọ ọrụ - ọ zuru oke ma nwee ike ikpuchi ihe niile gbasara akara, ntanetị na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ebe o zuru ezu, o siri ike ide otu post gbasara akwụkwọ a niile. N'ihi ya, ọ ga-amasị m ịkekọrịta nchịkọta Brian nke iwu nke itinye aka maka azụmaahịa na mgbasa ozi sitere na Isi nke 17 (mesiri ike m):
Gbaa mbọ hụ na a na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe, na-emeziwanye ụda olu.
Tinye uru itinye aka na nke ọ bụla - nye aka na ogo na ihe nketa.
Sọpụrụ ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ na kwa na-asọpụrụ nnọkọ ahụ nke ị na-ekere òkè na ya.
Gbaa mbọ hụ na ị sọpụrụ ikike nwebisiinka ma na-eme ma na-akwalite iji ojiji nke ọdịnaya eme ihe n'ụzọ ziri ezi.
Cheb'obi nzuzo na nke onwe ozi.
Ghazie uzo ma bụrụ mmadụ (nke ọma, bụrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi ma nyere aka).
Na-anọchite ihe ị kwesịrị ịnọchi anya.
Mara ma rụọ ọrụ n'ime akọwapụtara oke.
Mara mgbe ị ga-agbakọta 'em ma ghara itinye aka na trolls ma ọ bụ ịdaba mkparịta ụka mkparịta ụka.
Debe ihe mkparịta ụka dị ka ọ na-emetụta ịkọwapụta na ime ka ụdị mmadụ dị mkpa na uru nke akara gị na ika ị na - anọchite anya.
Nọgide na ozi, na isi, yana egwu site na ebumnuche nke ọrụ gị na ya mmetụta na azụmahịa ụwa nke ị na-atụnye ụtụ.
Emela ahịhịa mpi - ọ bụghị ozugbo, agbanyeghị.
Rio mgbaghara mgbe ọ dị mkpa.
Gbalịa zaa ajụjụ maka omume gị ma ghara inye ngọpụ.
Mara onye ị na-agwa okwu na ihe ha na acho.
Gosiputa mmekọrịta, nnọchite anya, mmekọ, na ebumnuche.
Practice njide onwe onye; ụfọdụ ihe ndị na-adịghị uru ikere òkè.
Ntuziaka ndị a abụghị naanị na-ekpuchi iwu nke itinye aka na ntanetị, achọrọ m na ndị a bụ iwu nchịkwa nke mmekọrịta ọ bụla na ndị ọrụ sitere na ụlọ ọrụ ọ bụla. Brian gara n'ihu na-agwa onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ ka ọdee akwụkwọ ahụ ma kwado ụkpụrụ nduzi ha. Ebe m rụworo ụlọ ọrụ ole na ole, adọ m aka na ntị megide imebi iwu dịka ndị a. Otu ụlọ ọrụ m maara hụrụ n'anya iji ohere ọ bụla kpofuo (ihe ha kwenyere bụ) asọmpi… yana oge ọ bụla m kwenyere na ha na-eme onwe ha ihere.
Akwụkwọ a nwere ọtụtụ ozi ma kwesịrị ịbụ iwu achọrọ maka ụlọ ọrụ ọ bụla na-adanye na mgbasa ozi ọhụụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịgụghị akwụkwọ ahụ site na mkpuchi ruo na nsọtụ, nhazi nke akwụkwọ ahụ, ngalaba nkọwa zuru ezu, na ndepụta aha ya nke ọma mere ka ọ bụrụ akwụkwọ ntụaka kachasị maka desktọọpụ ahịa ọ bụla.
Tags: dị njọnweta akwa vidiyongwa iphonemdzmgbasa ozina-anabata saịtịadams scott
Atụmatụ Mgbasa Ozi Ọha nke BP
Jun 28, 2010 na 12: 10 PM
Dịka onye ndụmọdụ IT, amaara m nke ọma na njikwa IT na-agbasi mgba ike ma mgbasa ozi mmekọrịta ọ na-arụpụta ma ọ bụ na-egbochi ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ha. A na-emepe sọftụwia na ndị na-achịkwa IT na-ekpebi iwu na mgbochi. Nche nke netwọkụ nke ụlọ ọrụ nọ n'ihe ize ndụ mana ikike nke ihe ọhụụ na-eji usoro mgbasa ozi eme ihe bụ nnukwu karọt maka mkparịta ụka banyere otu esi eji usoro ahụ eme ihe n'ụzọ ziri ezi. Palo Alto netwọt wee jiri akwụkwọ ọcha, http://bit.ly/d2NZRp, nke ga achoputa ihe ndi gbara gburu-gburu mmadu na ebe oru. Ọ dị mkpa ịghara ịghọta naanị uru dị na azụmaahịa otu mmadụ si ebi ndụ, mana egwu ọ na-eweta na nnukwu ụlọ ọrụ ROI na arụpụta ihe mgbe ọ bịara na nchekwa na nchekwa nke sava ahụ.